केवल तथ्य तथ्य अभिलेखहरू - जेफरसन सेन्टर - मानसिक स्वास्थ्य र पदार्थ प्रयोग सेवाहरू
केवल तथ्यहरू: डिप्रेसन
केवल दु: खी महसुस वा असन्तुष्ट प्याच को माध्यम बाट जाने भन्दा, उदासीनता एक गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य अवस्था हो जसलाई बुझ्नु, उपचार र एक राम्रो रिकभरी योजना चाहिन्छ। प्रारम्भिक पहिचान, निदान र एक प्रभावी उपचार योजनाको साथ, धेरै व्यक्तिहरू राम्रो हुन्छन्। तर यदि उपचार नगरिएमा, उदासिनता विनाशकारी मात्र हुन सक्दछ जोसँग ती मानिसहरुलाई मात्र हुन्छ […]
यो के हो? मौसमी असरदार डिसअर्डर (SAD) डिप्रेशनको एक प्रकार हो जुन आउँदछ र मौसमहरूको साथ जान्छ। जबकि यो जाडो महिनामा अधिक विशिष्ट छ, केवल किनकि हामी वसन्तमा जाँदैछौं भन्दैमा यसको मतलब यो होइन कि हामी योबाट भाग्यौं। यसले अझै धेरै व्यक्तिलाई असर गर्न सक्छ, कहिले काहिं जब कम अपेक्षित हुन्छ। स are्केत के हो […]
केवल तथ्यहरू: आतंक विकार
पैनिक डिसअर्डर भनेको के हो? आतंक डिसआर्डर भएका मानिससँग अचानक र दोहोरिने डरका हमला हुन्छ जुन केहि मिनेट वा लामो समयसम्म रहन्छ। यसलाई आतंककारी आक्रमण भनिन्छ। आतंककारी हमलाहरू प्रकोपको डर वा नियन्त्रण गुमाउनुपर्‍यो जब कुनै वास्तविक खतरा नभए पनि हो। एक व्यक्तिको पनि एक कडा शारीरिक प्रतिक्रिया हुन सक्छ […]
केवल तथ्यहरू: बच्चाहरू र चिन्ता
केवल तथ्यहरू: बच्चाहरू र चिन्ता कुनै समय वा अर्को समयमा, वयस्कहरूको जस्तै सबै बच्चाहरू चिन्तित हुन्छन्। यो एक हुर्केको हिस्सा हो र वरिपरि र नयाँ अनुभवहरूमा निरन्तर समायोजन गर्दछ। समस्याहरू, यद्यपि, जब बच्चाहरूसँग स्थिर र लगभग स्थिर अवस्थाको बारेमा सामान्य जीवनको बारेमा, वा धेरै विशिष्ट तत्त्वहरूको […]
केवल तथ्यहरू: द्विध्रुवी विकार द्विध्रुवीय डिसऑर्डर भनेको के हो? द्विध्रुवीय डिसअर्डर, म्यानिक-डिप्रेशनल बिमारीको रूपमा पनि चिनिन्छ, मस्तिष्क विकार हो जुन मुड, ऊर्जा, गतिविधि स्तर, र दिन-प्रतिदिन कार्यहरू गर्न क्षमतामा असाधारण परिवर्तन गर्दछ। द्विध्रुवीय डिसअर्डरका लक्षणहरू गम्भीर हुन्छन्। तर द्विध्रुवीय विकारको उपचार गर्न सकिन्छ, र यस रोगबाट ग्रस्त व्यक्ति […]
आघात के हो? आघात एक प्रतिक्रिया हो जब एक व्यक्ति घटना वा परिस्थितिबाट अभिभूत हुन्छ र तीव्र डर, त्रास, र असहायताको साथ प्रतिक्रिया गर्दछ। चरम आघात एक व्यक्ति को क्षमता का सामना गर्न को लागी ओभरराइड गर्न सक्छ र साथै शारीरिक स्वास्थ्य अवस्था को एक धेरै कारण हुन सक्छ, जस्तै मधुमेह, सीओपीडी, हृदय रोग, क्यान्सर र उच्च रक्तचाप। […]
जानुहोस् अर्को पाना "